Somali: Soomaali | Currently Open Recruitments | The City of Portland, Oregon
Civic Life Bureau Advisory Committee (Gudiga Talobixinta Nolosha Madaniga ah)
Mudada Kama Danbaysta ah ee Codsadayaasha: Aooosto 25, 2019
Lataliyaha Shaqaalaha: Mary Hartshorn, Mary.Hartshorn@portlandoregon.gov, 503-823-6033
Foomka codsiga iyo tilmaamahaba waxaad kahelaysaa salka hoose ee webseetkaan.
Ujeedada iyo Doorka the Bureau and Advisory Body (Gudigga Laanta Talobixinta)
Muhiim ayay utahay dadka xiisaynaaya inay kamid noqdaan gudiga inay fahmaan ayna taageeraan hadafka iyo shaqada gudigaan mutadawaca ah.
Shaqada Laantu waa: In kor looqaadaayo dhaqanka wada shaqaynta shacabka ayadoo la iskuxiraayo lana taageeraayo dhamaan dadka reer Portland ayadoo lakaashanaayo dawlada si loo dhiso xaafado iyo bulshooyin iskudhafan, amaan ah oo lagu noolaan karo.
Shaqooyinka gudiga waxa akamid ah:
1. Inay tilmaamo siiyaan Agaasimaha iyo Kooxda Hogaanka haysa ayna kala taliyaan adeegsiga waxtarka ah ee ilaha sida ay uqusayso yoolka xeelada guud ee laanta iyo qorshaha sinaanta isirka;
Inay dib u eegis kusameeyaan yoolalka laanta, muhiimadaha barnaamijka, iyo bixinta qarashka;
b. Kaqaybgalka faahfaahsan ee hanaanka miisaaniyada sanad laha ah ee Bulshada iyo Nolosha Madaniga ah;
2. Inay danjire unoqdaan shaqada laanta iyo mida Magaalada.
Yaa kusoo biiri Kara
Si aad xubin uga noqoto gudiga talo bixinta, xubnaha waxaa qasab ku ah inay kunoolyihiin, kuciyaaraan, ilaahay kucaabudaan, dugsi kadhigtaan, kashaqeeyaan aa ganacsi kuleeyihiin Magaalada Portland.
Waxa aan raadino
Waxaan doonaynaa in dadka kudhaqan dhamaan daafaha Portland inay lawadaagaan codkooda gudigaan, gaar ahaana dadka horay qaybta uga ahaa gudiga. Hadaad doonayso inaad ushaqayso bulshadaada aadna dalada kacaawiso gaarista go'aano sax ah, hadaba waxaan sugaynaa inaan aragno codsigaaga. Tilmaamaha hos kuqoran ayaa ah waxa hagi doona hanaankeena xulashada xubnaha. Macno badan ayay noo samaynaysaa inaad jawaabaha kadhigto kuwo mawduuc qaas ah leh. Kaama doonayno inaad waxkasta soo qorto.
qadarinta kaqaybgalka bulshada ee shaqada dawlada
udoodida sinaanta isirka
inaad diyaar utahay kaqaybgalka kulanada aadna kaqaybgasho doodaha
inaad lahaato fikir dhalin yaro
inaad leedahay khibrado nololeed ood kasoo martay bulshooyinka dhaqan ahaan latakoori jiray
Kulanada bilaha ah ayaa dhici doona xiliyada fiidkii maalinta Isniinta ah kana dhici doona City Hall
Xubnaha ayaa shaqayn doonaa mudo dhan ilaa 8 sano
Xubnaha ayaa udiyaar garoobaaya kulanada markay fasax leeyihiin. Imoow adoo diyaar u ah kadoodida mawduucyada kulanka iyo qodobada ajandaha kujira. Mawduucyada kulanka ee dib u eegista ubahan ayaa laguusoo diri karaa ayadoo lagu siinaayo waqti kooban ood kudulmarto, waqtigaas kukoobnaan kara 1 asbuuc kahor xiliga kulanka.
Waxaan leenahay turjumaano kuwaasoo turjumi doona wada sheekaysiga kuna turjumi doona luuqadaada hooyo inta kulanku socdo. Fadlan codso turjumaan ugu yarana asbuuc kahor kulanka si aan waqti nagu filan uhelno diyaarintiisa.
Waxaa laga yabaa inay qasab noqoto inaad wax ku akhrido kuna qorto luuqadaada. Turjumaanada codka iyo qoralaka ah waxaa sameeyo ururo kabaxsan gudiga. Lahadaha turjumaanka ayaa kaduwanaan kara lahjada gobalka aad kaso jeedo noqona kara kuwo dukumiinti ahaan kaduwan.
Jadwalka Kulanka Laqaban doono
Isniinta, Oktoobar 21keeda markay saacadu tahay 5:30pm
Isniinta, Nufeembar 18keeda markay saacadu tahay 5:30pm
Isniinta, Diseembar 16keeda markay saacadu tahay 5:30pm
Isniinta, Janaayo 6deeda markay saacadu tahay 5:30pm
Isniinta, Janaayo 13keeda markay saacadu tahay 5:30pm
Feebaraayo - Wax kulan ah lama qabanaayo
Isniinta, Maarso 16keeda markay saacadu tahay 5:30pm
Abriil - Wax kulan ah lama qabanaayo
Isniinta, Maayo 18keeda markay saacadu tahay 5:30pm
Juun-Agoosto 2019 – FASAX, wax kulan ah lama qabanaayo
Dadka kusoo biira gudigaan waxay noqonayaan waxaan ugu yeerno “Saraakiisha Shacabka,” taasoo macnaheedu yahay intaad shaqada kujirto waa inaad si cadaalad iyo karaamo leh udhaqanto. Waxaan tababar kaasiinaynaa arintana marka la aqbalo codsigaaga. Qayb kamid ah sharciyada soo socda e Karaamada Saraakiisha Shacabka ayaa kadhigan inay qasab tahay inaad kooxda usheegto marka adigga ama qof qoyskaaga kamid ah uu dhaqaale ahaan kafaaiidaayo (ama uu uga fogaado bixinta qarashaad) asagoo adeegsanaaya soojeedinadaada. Arintaan axaa layiraahdaa “Iskudhaca Masaalixda.” Hadaad noosheegto suurtagalnimada Iskudhac dhanka Maslaxada ah taasi kama dhigna inaadan gudiga u adeegi karin, dhab ahaantii, gudiyo badan ayaa leh xubno ay suuragal tahay inay Iskudhac dhanka Maslaxada ah ka abuuraan gudiga. Waxaan kaaga mahadnaqaynaa iskudhftaantaada karaamada ee ku aadan Masaalixda Iskahor imaanaaya adoo kuqoraaya goomka kujira codsiga.
Buuxi codsiga unadir AdvisoryBodies@portlandoregon.gov si aad luuqadaada ugu codsato. Fadlan koobi garee oo gali jumlada hoose jumlada koobaad ee iimeelkaaga. Waxaa lagu turjumi karaa “Fadlan turjun iimeelkayga iyo lifaaqyo kasta oo kujira Soomaali.”
Please translate my email and any attachments into Somali.
Si aad qofkale ugala hadasho fursadaan ama aad caawimaad uhesho buuxinta codsiga Mary Hartshorn, Mary.Hartshorn@portlandoregon.gov, 503-823-6033
. Taleefanka adoo adeegsanaaya, hadaad oran karto erayga Ingiriiska ah ee “translator” waxay kacaawin kartaa shaqaalaheena inay fahmaan inaad ubaahan tahay turjumaan ama qof wax kuufasira.
Waxaan Kudadaalaynaa Helitaanka adeegga
Noosoo sheeg haday jiraan caqabado kaa haysta kaqaybgalkaaga. Casho ayaa labixinayaa kulanada fiidkii laqabto. Gaadiidka dadwaynaha ama basaska labaakimo ayaa diyaar ah hadii aad ubaahato gaadiidkaas si aad si buuxda uga qaybgasho.
Magaalada Portland waxay kudadaalaysaa inay helitaan macno leh kusamayso adeegyada. TSi aad ucodsato turjumaad, fasiraad, wax kabadalka macluumaadka, goob aad kunasato, ama waxyaabaha kale ee ku caawinaaya ama adeegyada, laxariir Mary Hartshorn, Mary.Hartshorn@portlandoregon.gov, 503-823-6033.
Macluumaadka Mutadawacnimada ah iyo Macluumaadka Sirta ah ee shaqsiyaadka
Magaaladu waxay kudadaalaysaa kaladuwanaanta, iskudhafnaanta, iyo sinaanta. Buuxinta macluumaadka goobta aad dagan tahay ee kuqoran codsigu waa mid ikhtiyaari ah, laakiin waxaan kugu dhiirigalinaynaa inaad macluumaadkaas bixiso. Magaaladu waxay u adeegsataa macluumaadkaan inuu gacan kagaysto xaqiijin in balamaha gudiga talobixintu ay camimaan dhamaan qaybaha bulshada. Macluumaadkaaga lama adeegsan doono inta xubnaha laqoraayo walaa inta lagu jiro hananaka xulashada. Sharciga gobalka iyo kan federaalka ayaa mamnuucaaya adeegsiga macluumaadkaan si laguugu takooro.
Wixii su'aalo guud ah oo laxariira barnamaijka Gudiga Talobixinta ama fursadaha kasoo bixi doona gudiga talobixinta fadlan iimeel udir AdvisoryBodies@Portlandoregon.gov.
Waxaan Kugu Dhiirigalinaynaa Inaad Codsato
Waxaan kugusoo dhawaynaynaa inaad gasho barteena si aad macluumaad dheeri ah uga ogaato laanta. www.portlandoregon.gov/civic